ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန် (ဇိုမီး)အဖွဲ့က တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင် လှိုင် အား ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့(Gal Hang Pah Tawi Na Award) ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့် » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အား ချင်းပြည်နယ်တီးတိန် (ဇိုမီး) အဖွဲ့မှ ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး Rev.Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung ဦးဆောင် သည့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ၊ ဧည့်ခန်းမဆောင် ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံ၍ (Gal Hang Pah Tawi Na Award) အား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးအပ်သည်။
အဆိုပါချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ပေးအပ်ပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းနောင်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ချင်းပြည်နယ်တီးတိန်(ဇိုမီး)အဖွဲ့မှ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး Rev.Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung နှင့်အတူ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး Rev. Fr. Thang Muan Lian၊ နှစ်ခြင်းသင်းအုပ်ဆရာများနှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာ ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး Rev.Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung က ခရစ်စမတ်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းစကားပြောကြား၍ ဦးကပ်ခင်းပေါင်က တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အား ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ပေးအပ်မှုဆိုင်ရာ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကိုဖတ်ကြားပြီး ချင်း သူရဲကောင်းဘွဲ့ (Gal Hang Pah Tawi Na Award) အား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ထံပေးအပ်သည်။ ယင်းနောက် ဦးလျန်ခန့်တွောင်က ချင်းသူရဲကောင်း အကြောင်းအား ဖတ်ကြားပြီး ဦးခမ်းဆွင်းမုံက တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံ ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ အထိမ်းအမှတ်ဓား အား ပေးအပ်သည်။ ယင်းနောက် တက်ရောက်လာကြသည့်အဖွဲ့ဝင်များက တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ထံ ချင်းရိုးရာဓလေ့ထုံးစံ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်ကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည် ပြောကြားရာတွင် မြန်မာ နိုင်ငံကိုလိုနီလက်အောက်သို့ကျရောက်ခဲ့စဉ်က ချင်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် ချင်းတိုင်းရင်း သားများသည် အခြားတိုင်းရင်းသားများနှင့်အတူ နယ်ချဲ့များအား သတ္တိရှိရှိရဲဝံ့စွာဖြင့် တွန်းလှန် တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့် ချင်းတိုင်းရင်းသားများ ကိုယ်စားဂုဏ်ယူပါကြောင်း၊ ယခုအခါမိမိအား ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးအနေဖြင့် အသိအမှတ်ပြုသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်းနှင့် တန်ဖိုး ထားပါ ကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး တိုင်းရင်းသားများသည် နိုင်ငံအနှံ့ပျံ့နှံ့နေထိုင်ကြသဖြင့် လူမျိုးစွဲ၊ ဒေသစွဲမထားကြဘဲ တစ်မြေတည်းနေ၊ တစ်ရေ တည်း သောက်၊ တစ်လေတည်းရှူကြသည့် ညီအစ်ကိုမောင်နှမရင်းစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ညီညီညွတ်ညွတ် နေထိုင် ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးသည်အရေးကြီးပြီး တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိမှသာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ချင်းပြည်နယ်သည် ယခင်ကတည်းက လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ များမရှိခဲ့သော ဖြူစင်ပြီးသားနယ်မြေဖြစ်၍ အရောင်မစွန်းစေလိုကြောင်း၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောကြောင့် ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ဝေးလံခေါင်းပါးသောဒေသများရှိ ဒေသခံပြည်သူများ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် တပ်မတော်မှကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသကဲ့သို့ ချင်းပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်း တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ ကြောင်း၊ ထို့အတူဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ အတန်းပညာများမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် မိမိတို့၏သားသမီးများ ပညာရည်မြင့်မားရေးကို အလေး ထားဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက်ဘုန်းတော်ကြီး Rev.Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung က ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ (Gal Hang Pah Tawi Na Award) အား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံပေးအပ်နိုင်သည့် အတွက်များစွာဝမ်းမြောက်ရကြောင်း၊ ယနေ့သည် ချင်းတိုင်းရင်းသားများအတွက် သမိုင်းစာမျက်နှာ သစ်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တပ်မတော်သည်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအခန်း ကဏ္ဍများ တွင် ပါဝင်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသကဲ့သို့ အမိနိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ခဲ့သည့် တပ်မတော်သည် ပြည်သူ များ၏လိုလားချက်ဖြစ်သည့် ဒီမိုကရေစီလမ်း ကြောင်းပေါ်သို့လည်း အောင်မြင်စွာလျှောက်လှမ်း နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်းသည် သမိုင်းဝင်ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ချင်း တိုင်းရင်းသားများအနေဖြင့် တပ်မတော်နှင့်အတူ အမြဲရပ်တည်ဆောင်ရွက်နေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နှစ်ခြင်းသင်းအုပ်ဆရာ Rev. Cin Sian Pau က နိုင်ငံတော်၊ တပ်မတော် နှင့် ပြည်သူများ အားလုံးအတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းစကား ပြောကြားသည်။ ၎င်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က ဘုန်းတော်ကြီး Rev.Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား အမှတ် တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်ပြီး စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
အဆိုပါ ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ (Gal Hang Pah Tawi Na Award)သည် မြောက်ပိုင်းချင်းတိုင်းရင်း သားများ၏ အမြင့်ဆုံးသူရဲကောင်းဘွဲ့ဖြစ်ပြီး ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ဓားမှာ ချင်းတိုင်းရင်းသားသူရဲ ကောင်းများကိုင်ဆောင်ခဲ့သည့် ဓားနှင့်ပုံစံတူပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အား ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ ပေးအပ်ရခြင်းမှာ
(က)နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲနေသည့် ကာလတွင် တပ်မတော်မှ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးခြင်း၊ စနစ်တကျထိန်းကျောင်းပေးခြင်းနှင့် တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက်ကာကွယ်ပေးခြင်း။
(ဂ)ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသော တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် အသက်နှင့် လဲ၍ကာကွယ်သည့် အရည် အချင်းပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်း။ စသည့်အချက်သုံးချက်နှင့် ကိုက်ညီသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျအား ခငျြးပွညျနယျတီးတိနျ (ဇိုမီး) အဖှဲ့မှ ကကျသလဈခရဈယာနျဘုနျးတျောကွီး Rev.Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung ဦးဆောငျ သညျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ၊ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ ၌ လာရောကျတှဆေုံ့၍ (Gal Hang Pah Tawi Na Award) အား ဂုဏျပွုခြီးမွှငျ့ပေးအပျသညျ။
အဆိုပါခငျြးသူရဲကောငျးဘှဲ့ပေးအပျပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးထှနျးထှနျးနောငျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး ခငျြးပွညျနယျတီးတိနျ(ဇိုမီး)အဖှဲ့မှ ကကျသလဈ ခရဈယာနျဘုနျးတျောကွီး Rev.Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung နှငျ့အတူ ကကျသလဈ ခရဈယာနျဘုနျးတျောကွီး Rev. Fr. Thang Muan Lian၊ နှဈခွငျးသငျးအုပျဆရာမြားနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျကွသညျ။
ဦးစှာ ကကျသလဈခရဈယာနျဘုနျးတျောကွီး Rev.Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung က ခရဈစမတျဆုမှနျကောငျးတောငျးစကားပွောကွား၍ ဦးကပျခငျးပေါငျက တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျအား ခငျြးသူရဲကောငျးဘှဲ့ပေးအပျမှုဆိုငျရာ ဂုဏျပွုမှတျတမျးလှာကိုဖတျကွားပွီး ခငျြး သူရဲကောငျးဘှဲ့ (Gal Hang Pah Tawi Na Award) အား တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ ထံပေးအပျသညျ။ ယငျးနောကျ ဦးလနျြခနျ့တှောငျက ခငျြးသူရဲကောငျး အကွောငျးအား ဖတျကွားပွီး ဦးခမျးဆှငျးမုံက တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျထံ ခငျြးသူရဲကောငျးဘှဲ့ အထိမျးအမှတျဓား အား ပေးအပျသညျ။ ယငျးနောကျ တကျရောကျလာကွသညျ့အဖှဲ့ဝငျမြားက တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျထံ ခငျြးရိုးရာဓလထေုံ့းစံ လကျဆောငျပစ်စညျးမြားပေးအပျကွသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ကြေးဇူးတငျစကားပွနျလညျ ပွောကွားရာတှငျ မွနျမာ နိုငျငံကိုလိုနီလကျအောကျသို့ကရြောကျခဲ့စဉျက ခငျြးတိုငျးရငျးသားခေါငျးဆောငျမြားနှငျ့ ခငျြးတိုငျးရငျး သားမြားသညျ အခွားတိုငျးရငျးသားမြားနှငျ့အတူ နယျခြဲ့မြားအား သတ်တိရှိရှိရဲဝံ့စှာဖွငျ့ တှနျးလှနျ တိုကျခိုကျခဲ့သဖွငျ့ ခငျြးတိုငျးရငျးသားမြား ကိုယျစားဂုဏျယူပါကွောငျး၊ ယခုအခါမိမိအား ခေါငျးဆောငျ တဈဦးအနဖွေငျ့ အသိအမှတျပွုသညျ့အတှကျ ဂုဏျယူဝမျးမွောကျပါကွောငျးနှငျ့ တနျဖိုး ထားပါ ကွောငျး၊ မိမိတို့နိုငျငံသညျ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးပေါငျးစုံဖွငျ့ဖှဲ့စညျးထားပွီး တိုငျးရငျးသားမြားသညျ နိုငျငံအနှံ့ပြံ့နှံ့နထေိုငျကွသဖွငျ့ လူမြိုးစှဲ၊ ဒသေစှဲမထားကွဘဲ တဈမွတေညျးနေ၊ တဈရေ တညျး သောကျ၊ တဈလတေညျးရှူကွသညျ့ ညီအဈကိုမောငျနှမရငျးစိတျဓာတျဖွငျ့ ညီညီညှတျညှတျ နထေိုငျ ကွရမညျဖွဈကွောငျး၊ ဒသေတညျငွိမျအေးခမျြးရေးသညျအရေးကွီးပွီး တညျငွိမျအေးခမျြးမှုရှိမှသာ ဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမညျဖွဈကွောငျး၊ ခငျြးပွညျနယျသညျ ယခငျကတညျးက လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခ မြားမရှိခဲ့သော ဖွူစငျပွီးသားနယျမွဖွေဈ၍ အရောငျမစှနျးစလေိုကွောငျး၊ လမျးပနျး ဆကျသှယျရေး ခကျခဲသောကွောငျ့ ခငျြးပွညျနယျအတှငျး ဝေးလံခေါငျးပါးသောဒသေမြားရှိ ဒသေခံပွညျသူမြား ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုလုပျငနျးမြားအတှကျ တပျမတျောမှကူညီဆောငျရှကျပေးလကျြရှိသကဲ့သို့ ခငျြးပွညျနယျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျလညျး တတျနိုငျသညျ့ဘကျမှ ကူညီဆောငျရှကျပေးလကျြရှိ ကွောငျး၊ ထို့အတူဒသေဖှံ့ဖွိုးရေးလုပျငနျးမြားကိုဆောငျရှကျနိုငျရနျ အသိပညာ၊ အတတျပညာ၊ အတနျးပညာမြားမရှိမဖွဈလိုအပျသောကွောငျ့ မိမိတို့၏သားသမီးမြား ပညာရညျမွငျ့မားရေးကို အလေး ထားဆောငျရှကျပေးရမညျဖွဈကွောငျးပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျဘုနျးတျောကွီး Rev.Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung က ခငျြးသူရဲကောငျးဘှဲ့ (Gal Hang Pah Tawi Na Award) အား တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျထံပေးအပျနိုငျသညျ့ အတှကျမြားစှာဝမျးမွောကျရကွောငျး၊ ယနသေ့ညျ ခငျြးတိုငျးရငျးသားမြားအတှကျ သမိုငျးစာမကျြနှာ သဈဖှငျ့လှဈသညျ့နဖွေ့ဈပါကွောငျး၊ တပျမတျောသညျနိုငျငံတျောဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျမှုအခနျး ကဏ်ဍမြား တှငျ ပါဝငျထမျးဆောငျလကျြရှိသကဲ့သို့ အမိနိုငျငံတျောကိုကာကှယျခဲ့သညျ့ တပျမတျောသညျ ပွညျသူ မြား၏လိုလားခကျြဖွဈသညျ့ ဒီမိုကရစေီလမျး ကွောငျးပျေါသို့လညျး အောငျမွငျစှာလြှောကျလှမျး နိုငျအောငျဆောငျရှကျပေးခဲ့ခွငျးသညျ သမိုငျးဝငျဆောငျရှကျခကျြတဈခု ဖွဈပါကွောငျး၊ မိမိတို့ခငျြး တိုငျးရငျးသားမြားအနဖွေငျ့ တပျမတျောနှငျ့အတူ အမွဲရပျတညျဆောငျရှကျနမေညျဖွဈပါကွောငျး ပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ နှဈခွငျးသငျးအုပျဆရာ Rev. Cin Sian Pau က နိုငျငံတျော၊ တပျမတျော နှငျ့ ပွညျသူမြား အားလုံးအတှကျ ဆုမှနျကောငျးတောငျးစကား ပွောကွားသညျ။ ၎င်းငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျက ဘုနျးတျောကွီး Rev.Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung နှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားအား အမှတျ တရလကျဆောငျပစ်စညျးမြားပေးအပျပွီး စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျကွသညျ။
အဆိုပါ ခငျြးသူရဲကောငျးဘှဲ့ (Gal Hang Pah Tawi Na Award)သညျ မွောကျပိုငျးခငျြးတိုငျးရငျး သားမြား၏ အမွငျ့ဆုံးသူရဲကောငျးဘှဲ့ဖွဈပွီး ခငျြးသူရဲကောငျးဘှဲ့ဓားမှာ ခငျြးတိုငျးရငျးသားသူရဲ ကောငျးမြားကိုငျဆောငျခဲ့သညျ့ ဓားနှငျ့ပုံစံတူပွုလုပျထားခွငျးဖွဈသညျ။ တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျအား ခငျြးသူရဲကောငျးဘှဲ့ ပေးအပျရခွငျးမှာ
(က)နိုငျငံရေးပွုပွငျပွောငျးလဲနသေညျ့ ကာလတှငျ တပျမတျောမှ မားမားမတျမတျရပျတညျပေးခွငျး၊ စနဈတကထြိနျးကြောငျးပေးခွငျးနှငျ့ တိုငျးပွညျနှငျ့လူမြိုးအတှကျကာကှယျပေးခွငျး။
(ဂ)ရဲစှမျးသတ်တိနှငျ့ပွညျ့စုံသော တိုငျးပွညျနှငျ့လူမြိုးအတှကျ အသကျနှငျ့ လဲ၍ကာကှယျသညျ့ အရညျ အခငျြးပွညျ့စုံသောပုဂ်ဂိုလျဖွဈခွငျး။ စသညျ့အခကျြသုံးခကျြနှငျ့ ကိုကျညီသောကွောငျ့ ယခုကဲ့သို့ ဂုဏျပွုခြီးမွှငျ့ပေးအပျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။